‘बिग बोस–१३’का लागि सलमानले कति पारिश्रमिक लिदैछन् ? – Nepal Trending
On ८ आश्विन २०७६, बुधबार २१:५२
काठमाडौं । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानले पछिल्लो दश वर्षयता लगातार ‘बिग–बोस’लाई होस्ट गर्दै आएका छन् । अभिनेता खानले कयौं पटक अन्तर्वार्तामा यस शोलाई होस्ट गर्ने इच्छा नभएको बताइसकेका छन् । तर मेकर्स–च्यानलकोे आग्रहमा उनले विगत दश वर्षदेखि यस शोलाई निरन्तर होस्ट गर्दै आएका छन् ।
सलमानले ‘बिग बोस’ होस्ट गर्नका लागि के–कति पारिश्रमिक पाउँछन् ? भन्ने सबैको मनमा प्रश्न उब्जिन्छ नै । पछिल्लो जानकारी अनुसार ‘बिग बोस’को सिजन १३ का लागि सलमान खानलाई ठूलो अमाउन्ट छुट्याइएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार सलमानलाई २६ एपिसोडका लागि ४०३ करोड दिइएको बताइएको थियो । तर, अहिले आएर यस रिपोर्ट पूर्ण गलत भनिएको छ । पिंकविलाले आफ्नो रिपोर्टमा यस शोका लागि सलमान खानको पारिश्रमिकलाई सेयर गरेका छन्, जहाँ यस सिजन १०५ दिन, अर्थात १५ साता चल्नेछ । पछिल्लो वर्ष सलमानले हरेक साताको ११ करोड पारिश्रमिक चार्ज गरेका थिए ।
२०१८ मा सलमानले पूरा एपिसोडको १६५ करोड पारिश्रमिक लिएका थिए । बिग बोस–१३ लाई ठूलो स्केलमा लञ्च गरिदैछ । त्यसोत, सलमान खानले पनि आफ्नो पारिश्रमिक बढाएका छन् । यो सिजनका लागि सलमानलाई हरेक साताको १३ करोड पारिश्रमिक दिइएको बताइएको छ । सिजन १३ मा सलमानले लगभग २०० करोडको हाराहारीमा पारिश्रमिक चार्ज गर्दैछन् ।